Wasiirka Dalxiiska oo Booqday Goobaha Dalxiisyada Yaryar ee Koonfurta Mahé
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Seychelles » Wasiirka Dalxiiska oo Booqday Goobaha Dalxiisyada Yaryar ee Koonfurta Mahé
Jebinta Wararka Caalamka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • News • Dib-u-dhiska • Wararka Seychelles • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Wararka kala duwan
Dhismayaasha Dalxiiska Yaryar ee Koonfurta Mahé
Wasiirka Arrimaha Dibadda iyo Dalxiiska, Danjire Sylvestre Radegonde wuxuu dib u bilaabay booqashooyinkiisii ​​rasmiga ahaa ee uu ku tagayay wada-hawlgalayaasha warshadaha dalxiiska Jimcihii la soo dhaafay, July 23, kana bilaabmay Anse Royale. Tani waxaa ka mid ahaa joogsiyada sagaal xarumood oo ku yaal Koonfurta Mahé oo leh wax ka yar 20 qol.
Wasiirka dalxiiska Radegonde ayaa sheegay inay dhiiri galinayso tirada badan ee degenaanshaha xarumaha yar yar ee la booqday.
Inta badan milkiilayaasha hoteelada waxay qireen inay gaareen ku dhawaad ​​100 % deganaanshaha bilihii la soo dhaafay.
Qeybinta martida goobta loo socdo waxay umuuqataa mid isku dheelitiran inta udhaxeysa kuwa yar yar iyo kuwa waaweyn.
Booqashooyinku waxay fursad u ahayd Wasiirka Radegonde iyo Xoghayaha Guud ee Dalxiiska (PS), Mrs. Sherin Francis inay indhahooda ku soo arkaan badeecadaha la siiyo martida halka loo socdo.
Wasiirka Radegonde ayaa sheegay inay dhiiri galinayso tirada badan ee degenaanshaha xarumaha yar yar ee la booqday.
Booqashooyinku waxay ahaayeen kuwo mira dhal ah oo lagu xaqiijinayo in heerka deganaanshuhu uu aad ugu qanacsan yahay dhismayaashayada yar yar, iyadoo inta badan milkiileyaasha hoteellada ay qireen inay gaareen 100% degitaan bilihii la soo dhaafay. Waxay u muuqataa inay jirto qaybinta dheelitiran ee booqdayaasha meeshii ay u socdeen, taas oo lid ku ah aragtida ah in booqdayaashayadu ay u xaglinayaan xarumo waaweyn, ”ayuu yidhi Wasiir Radegonde.
Wuxuu faallo ka bixiyay inuu ku faraxsan yahay inuu awooday inuu mar kale xaqiijiyo ballanqaadkii waaxda dalxiiska ee dhammaan la -hawlgalayaasha shaqsi ahaan.
"Wasaaraddu waxay diyaar u tahay inay gacan -siiso la -hawlgalayaasha si ay u wanaajiyaan badeecadooda iyo bixinta adeeggooda iyo sidoo kale inay ka caawiyaan muuqaalkooda iyo suuqgeynta guud ahaan."
Dhinaceeda, PS Francis ayaa u sharraxday muhiimadda booqashada xafiiskeeda iyada oo waafaqsan mudnaanta ay soo bandhigtay waaxdeeda bishii Juun ee sannadkan.